Ọdịnihu Dị Mma nke Rlọ Ahịa | Martech Zone
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ubi ahụla nnukwu ohere na ohere ọrụ na ọganihu na teknụzụ, ọrụ ọrụ mkpọsa ugbu a na-arị elu ma na-achọ ịbụ nhọrọ echedoro maka ọdịnihu. Otu n'ime ọrụ anọ dị na United States bụ na ụlọ ahịa ndị na-ere ahịa, mana ụlọ ọrụ a metụtara ihe karịrị ahịa. N'ezie, ihe karịrị 40% nke ọnọdụ dị na mkpọsa bụ ọrụ ndị ọzọ na-abụghị ahịa.
Ọrụ 5 kachasị elu na-ere ahịa na-ere ahịa bụ nyocha ahịa, ịre ahịa email, ọchụchọ ebumpụta ụwa, ọchụchọ akwụ ụgwọ, na mgbasa ozi mmekọrịta. O doro anya na azụmahịa e-commerce dị oké mkpa maka ịga nke ọma n'ịzụ ahịa na ntinye ego kachasị elu n'afọ a ga-abụ na mkpanaka, mmezi saịtị, na ịzụ ahịa. Fọdụ ndị na-ere ahịa adịla mbụ karịa egwuregwu ahụ nwere ihe ọhụụ ọhụrụ iji gbagoo ndị ọzọ. Kroger nwere igwe ese foto infrared na-ekpo ọkụ nke ọma iji chọpụta ọnụọgụ ole ga-emeghe iji mepee. Ngwa Walmart gbanwere n'ọnọdụ ụlọ ahịa ka ị nwee ike ịchọta ihe ọ bụla ị na-achọ. Site na ọnụọgụ nke uto na teknụzụ na ịrị elu nke azụmahịa, anyị ga-ahụ mgbanwe na ụlọ ahịa na-ere ahịa na afọ 5 sochirinụ karịa ka anyị mere na 100 gara aga. Ntụaka Ekekọrịta ọnụ ọgụgụ maka mkpọsa na ndị ọrụ ya, nke ụlọ ọrụ dị n'elu egwuregwu ha, yana ntinye ego e-commerce kachasị elu maka 2014 na infographic dị n'okpuru.
Ọdịnihu nke ụlọ ahịa na e-commerce bụ ihe na-egbuke egbuke maka ọrụ, ihe ọhụrụ na itinye ego.
Tags: aeropostalebaynotecarmaxecommerceEbeemacy siụlọ nkwakọba ihe ndị nwokeUzoukwunkpuruonline retailqtreiretailsephorastarbucksakpa ụlọ ahịawalgreensWalmartndị wegmansNri nilezappos
Marketingre ahịa maka ndị na-ege ntị na Cross-Platform
Nddị nke na-ewe ndị ahịa ọdịnaya